iVIGA Tap Factory Supplier | Kpatụ onye nrụpụta China
Afọ 13 Ọkachamara Ọkachasị Faucet
Wepu ihe eji esi nri
Akpa aka nri kichin abụọ
Igwe mmiri nke otu oghere
Kpoo Faịlụ nke Kitchen
Faucet kichin ya na ihe nzacha
Ọdọ Mmiri Na -alụbeghị Di
Igwe mmiri ịsa ahụ Thermostatic
Ihe mkpuchi mmiri mmiri abụọ
Ebe ndozi ebe a na-asa ahụ
Agbakwunyere Ihe Mgbasa Ọbara Igbe
Agbakwunyere Igbe ịsa mmiri
Mgbidi Ọbara Ndị Elu Ala
Ọkwa mmiri ịsa ahụ dị n'elu ala
Ihe omume Nelson
Ihe eji egwu Cliff
Ihe nkiri Omar
Ihe nkedo ulo
Ngwunye ụlọ ịsa ahụ
Spolọ ọrụ spout
Igwe eji esi mmiri
Single Cold Kpatụ
Usoro nke Gama
Usoro nke Malta
Ihe eji eme Hilda
Ngwaahịa Faucet Kichin kachasị mma + Ọzọ
Matte nwa kichin sink faucet igwekota
Matte nwa kichin sink faucet
Matte nwa kichin faucet
Matte black square imewe kichin sink mmiri
Matte nwa pụrụ iche weputara isi nri kichin
Matte nwa vintage ochie na-agbadata ihe igwekota igwe eji esi nri
Matte ojii wepụta ebe a na-esi esi esi ebe a na-adọpụta mmiri ma ọ bụ ebe a na-esi esi esi
Ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ batrị kacha mma + Ọzọ
Matte nwa ogologo oche toro n’elu ụlọ ịwụ ahụ pọmpụ mmiri
Matita ụlọ ịsa ahụ maka ụlọ ịsa ahụ batrị
Matte nwa ogologo ụlọ ịwụ ahụ ogologo mmiri
Matte ojii ime ụlọ ịsa ahụ igwekota igwe nri mmiri
Igwe mmiri ọkụ Thermostatic + Ọzọ
Matte black themostatic bath train
Matte nwa thermostatic bath set
Matte ojii kọlụm ịcha mmiri ọkụ
Matte ojii ime ụlọ ịwụ ahụ thermal
Ngwaahịa ụlọ na-ere mmiri + Ọzọ
Ngosipụta Ngosi + Ọzọ
VIGA Ga-aga 26th 2021 KBC Trade Fair Na Shanghai
2021 Shanghai Kitchen na athlọ mposi Ngosi
EGO ND FA KWES 2016R XNUMX XNUMX
BATIMAT UGO 2019
CANTON FAIR 2018 AKWUMKWỌ
EGO ND FA KWES 2018R XNUMX XNUMX
EGO ND FA KWES 2017R XNUMX XNUMX
GBASARA ANYỊ + Ọzọ
Ikeping City Garden Sanitary Ware Co., Ltd. (ika iVIGA) dị na Shuikou Town, ebe a maara dị ka "Kingdom of Plumbing and Sanitary Ware" na China. Nwee ọtụtụ ahụmịhe na ngalaba mmepe, imewe, na nrụpụta nke ọkpọkọ mmiri nke bụ ọkachamara na-arụ ọrụ iji mepụta ngwa ahịa azụmahịa na nke obodo na ngwa.
Ngwaahịa a ruru ihe karịrị usoro 60, nke gụnyere ụdị akwa mmiri, dị ka Lọ ịwụ na-asa mmiri, Kitchen Faucets, ịsa ahụ fosets, ịsa ahụ fosets, ịsa na kọlụm, ,lọ ịwụ ngwa na ịwụ ngwa wdg Ngwaahịa na -ekpuchi igwe na -agwakọta na -ekpo ọkụ na mmiri oyi, otu mgbata oyi na -atụ na ọkpọkọ usoro thermostatic. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ijikwa azụmaahịa niile dị n'okpuru ihe nlele ma ọ bụ eserese (ODM) na ọrụ OEM. iVIGA Faucet ụlọ ọrụ bụ tumadi mbupụ na Europe, North America, South America, Southeast Asia na Middle East.
Onwere ndi ochichi maara ihe nke nwere ihe nlere anya nke uwa ndi tozuru site na ulo akwukwo di elu na iVIGA. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na-ewulite usoro a na-azụlite na ịkwalite nke ọma.
Iguzosi ike n’ezi ihe, ịdabere n’ezi ihe na ihe ọhụrụ bụ ebumnuche bụ isi na iVIGA na-agbaso oge niile kemgbe e guzobere ya. Offernye ndi ahia n’enye obi uto ma nwekwaa ezi ihe na ihe di elu bu ebumnuche iVIGA mgbe nile. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-ejide akụrụngwa nke oge ahụ ma kwaga n'akụkụ ụwa site na njirimara tozuru etozu nke ụlọ ọrụ tozuru oke.
N'ịbụ ndị echiche nke "Iguzosi ike n'ihe, Nzipụta na Innovation" na-eduzi, iVIGA na-enye ọrụ nwere ịnụ ọkụ n'obi na iche echiche na ngwaahịa dị elu maka ndị na-azụ ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ nke iVIGA na-achụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ga-ejide ikike oge ahụ ma gaa n'akụkụ ụwa site na njirimara tozuru etozu nke ụlọ ọrụ tozuru oke
News + Ọzọ
Chee ihe ịma aka nke snow na ice ihu - ARROW Sanitary S6 ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi ụlọ ọrụ ihe ịma aka mbụ dị oke egwu.
N'oge egwuregwu Olimpik oyi, ARROW weputara ihe ịma aka dị n'èzí a dị oke oyi, ọzọkwa, ọ mepụtara nnwale kacha dị n'èzí nke mbụ na ụlọ ọrụ ịdị ọcha. Ụlọ mposi nwere ọgụgụ isi nke Arrow emeriela ọnọdụ oyi dị n'èzí. Ọ... GỤKWUO
N'afọ 2021, ahia mbubata na mbupu nke China na ceramics Sanitary bụ ijeri Yuan 64.667, mmụba nke 5.46% n'afọ n'afọ.
Dabere na data kọstọm nke Kitchen & Bath Information chịkọtara, na 2021, ngụkọta mbubata na mbupụ azụmaahịa nke ngwaahịa ceramiki ịdị ọcha (ihe ndozi a na-edozi akwa na ngwa ihe ọcha na seramiiki edoziri) na China bụ ijeri yuan 64.667, ... GỤKWUO
Uto ahụ bụ 31.9%. Mbupu dị elu nke ihe nrụnye ọkụ German na China na 2021
N'oge na-adịbeghị anya, VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) kwupụtara ọrụ nke ụlọ ọrụ ngwa ngwa ụlọ German na 2021. N'ozuzu, ahịa ụlọ ọrụ na-abawanye site na 8%, na ahịa German na-eto site na 6% na ahịa mba ọzọ site na 10%. ... GỤKWUO
Ihe Ọmụmụ Fucet + Ọzọ
Foset Aerator Ajụjụ
Kedụ ka m ga - esi amata etu igwe ikuku dị? Site n'enyemaka nke nickel na dime, ị nwere ike ịchọpụta ogo nke ikuku gị. Buru ụzọ wepụ ihe a na-etinye na ihe na-asacha ya. Debe nickel n’elu onye na - ekwu okwu, ma ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu okirikiri, onye na - eme ya na - enwe ogo. Ọ bụrụ na ọ bụghị ... + Gụkwuo ya
Gini bu ihe gbasaa ebe nile maka ulo？
Dika odibo nke oghere echichi nke akpopopu mmiri, otu akwara nwere akwa di iche-iche di iche-iche, uzo abuo nke otu onu, okpukpu abuo nke onu ogugu nke 3 inch na oghere ato nke ato nke 4. Mpempe akwụkwọ mmiri nke nwere otu oghere naanị ka awụnyere otu ọkpọkọ ọkpọ. Nke dayameta na-abụkarị 8mm. basi ... + Gụkwuo ya
Long spout iru kichin foset na 2 ọrụ sprayer
ABS abụọ ọrụ sprayer kichin foset bụ elu àgwà kichin igwekota. chrome okokụre izute mba plating chọrọ. Kedu ihe ọzọ, ọ nwere eriri 1.5 mita wepụ, ị nwere ike ihicha ma were mmiri ahụ n'ụzọ dị mfe. ọ bụkwa igwe nri kichin na-azọpụta mmiri. jiri Neoperl ebuanu aerator。 & nbs ... + Gụkwuo ya
Mmiri mmiri mberede mgbe mmiri gachara abụghị nsogbu nsogbu.
Na mberede mmiri na-asọ mgbe a sachara ụlọ ịsa ahụ, nke a abụghị nsogbu dị mma Iji nwee ike ịchụso nkasi obi nke ịsa ahụ, ihe ịgba mmiri ịsa ahụ ugbu a buru ibu buru ibu, na nnukwu mmiri ịsa ahụ ahụ pụtara na mmiri nwere mmiri karịa mgbe agbanyụrụ ya ọkpọkọ. Mmiri dị n'elu ịgba na ọkpọkọ ịsa ahụ nwere ike ịpụta ... + Gụkwuo ya
Purchaselọ ịsa ahụ ịzụrụ ụlọ ịsa ahụ Relọ Ọrụ Na-atụ aro ịha ụlọ ịsa ahụ dị mma.
Ime ụlọ ịsa ahụ, dị ka obere dị ka ụfọdụ ngwa, ha niile bụ ihe eji arụ ụlọ iji mepụta ụlọ ịsa ahụ dị mma. Ndị mmadụ na-eleghara anya ịzụta ngwaike ụlọ ịsa ahụ. Ọ dị mkpa ịmara na enweghị enyemaka nke obere ngwa ngwaike ndị a, ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ụlọ ịsa ahụ dị mma ... + Gụkwuo ya
Uzo zuru ezu nke izu ahia maka ihe eji asa mmiri, mmiri ozuzo, na uzo ala.
Nchịkọta zuru ezu nke ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ, mmiri ozuzo, na ala mmiri na-asa mmiri, showlọ ịsa ahụ, ebe a na-asa ahụ na ala ala dị ezigbo mkpa nke ngwaike. Ka anyị leba anya na nhọrọ atọ maka ịzụta. 1. bathroomzụta ụlọ ịsa ahụ faucets Họrọ dị ka ojiji na echichi ọnọdụ: Ọ bụrụ na ọ bụ otu mmiri ... + Gụkwuo ya
Olee otú ikewapụ Akọrọ na Wet N'ihi A 4 Square Mita Obere Ulo Bathroom?
Nhazi nke mpaghara nkewa mmiri-mmiri na ime ụlọ ịsa ahụ ugbu a bụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ndị na nhazi mma, mana maka ụfọdụ nkeji, ọ na-esiri ike ịwe ụlọ ịsa ahụ dị ka nkewa mmiri-mmiri. Echegbula onwe gị, ọ bụ ezie na oghere dị adị pere mpe, ọ naghị egbochi gị ịnwe batrị dị mma na nke nkụ ... + Gụkwuo ya
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na sprinkler nwere obere mmiri na - asọ ma na - ehi mmiri?
Kedu ihe m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na mmiri mmiri ịsa ahụ nwere obere mmiri, na-ehi mmiri, ma ọ bụ na-egbochi? A na-ejikarị ịsa ahụ n'ụlọ. Gịnị ma ọ bụrụ na otu ụbọchị na mberede achọpụta na mmiri eruola dị obere, igwe mmiri na-agba mmiri, ma ọ bụ gbochie ịsa ahụ? You maara ka esi edozi ya? Ọ bụ ya kpatara ya? Ka anyị lelee otu esi emeso wi ... + Gụkwuo ya
Ncha ọla edo, ihe mmetụta, Chrome, Black igwe anaghị agba agba kichin
Kitchen-fosets - Single Oghere Kitchen foset
Aka nri kichin eji eme nri
Wetuo kichin eji esi nri
Ebe a na-esi esi esi nri
Ihe zuru ebe nile, Gold, Brass, Waterfall Bathroom Sink Faucets, Vanity
Ejikọtara Ihe Ngwakọta
Ebe ndozi gbagoro agbago
Agbakwunyere na Igbe Mgbakwunye
Ihe mkpuchi igwekota agbakwunyere na igbe
Ngwunye Ngwakọta athlọ Elu | Bathtub ịsa ahụ foset
edemede ndị na-adịbeghị anya
Nnukwu ceramics nke mba ụwa nke mbụ ga-akwụsị ọrụ na Russia
Ntinye ego & ego | Nanan na-ezube ịgbasa ogige ụlọ ọrụ dijitalụ dijitalụ site na nde 800, Swell Sanitary Ware ọhụrụ ụlọ enyemaka nwechara nke ọma, Dongtao Wepụ Ritai Taoci
Ikeping City Garden Sanitary Ware Co., Ltd. (ika iVIGA) bu onye okacha n’enye aka meputa ahia na ihe ndi obodo.
Tinye: 38-5, 38-7 Jinlong Road, Jiaxing Industrial Mpaghara, Shuikou Town, Kaiping City, Guangdong Province, China
Copyright © 2022 iVIGA Tap Factory Supplier Ikike niile echekwabara.
Mkparịta ụka ndụ X